Amathiphu ayi-10 Okudala Isivumelwano Sokugcina Esiyimpumelelo | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Izeluleko Eziphezulu Eziyi-10 Zokwenza Isivumelwano Sokugcina Esiphumelelayo
Ukuvikela Ibhizinisi Lakho Neklayenti Lakho
Isivumelwano se-retainer yidokodo elisemthethweni elivikela wena neklayenti lakho ekubeni senkingeni lapho kunengxabano. Lapho wenza isivumelwano nekhasimende, ikakhulukazi umuntu obusebenzisana naye isikhashana, cishe ngeke ufune ukubheka ukuthi kungenzeka yini ukuthi ubuhlobo bube muncu.
Izinto zingahle zihambe kahle kakhulu neklayenti ukuthi awukwazi ukucabanga ngesimo lapho beyeka ukwenza kanjalo. Ngeshwa, kunezindlela eziningi izinto ezingaya ngazo eningizimu ngesikhathi sokwenza kwakho, futhi kufanele uzilungiselele ukuphatha izinto lapho lokhu kwenzeka. Enye indlela ebalulekile yokubhekana nezingxabano ezingaba khona ngokufunda ukuthi ungasakha kanjani isivumelwano esiphumelelayo sokugcina imali.
Isivumelwano esihlelwe kahle sokugcina imali sihlanganisa zonke izici ezibucayi zobudlelwano bebhizinisi lakho neklayenti lakho futhi sinikeze nendlela yokuphuma uma kunempikiswano. Izivumelwano zabagcini zinemihlomulo eminingi, esixoxe ngayo kulokhu okuthunyelwe.
Ngaphandle kwalezi zinzuzo, isivumelwano sokugcina sisiza ukuthi unqume kusengaphambili ukuthi iyiphi indlela yokuxazulula izingxabano ongathanda ukuyisebenzisa uma kuvela impikiswano phakathi kwakho neklayenti lakho. Kepha yini okufanele ifakwe kwisivumelwano sokugcina?
Lo mbhalo uzokhuluma ngamathiphu ayishumi aphezulu angakusiza ukuthi wakhe isivumelwano esiphumelelayo sokugcina imali nokuthi ungavikela kanjani ibhizinisi lakho kanye neklayenti lakho ngesivumelwano sakho sokugcina imali.
Isivumelwano Sokugcina Isivumelwano
Izivumelwano zabagcini ziyingxenye ebalulekile yobudlelwano bezomthetho, uma kungenjalo. Ukusuka ezinkampanini kuya kwezingcweti kuya kodokotela, wonke umuntu udinga amaphepha ambalwa asemqoka azosebenza ngawo ngenkathi engena esivumelwaneni, futhi lawa yimibhalo esetshenziselwa ukudala isivumelwano sabantu abagcina imali.
Izeluleko eziyi-10 zokwenza isivumelwano sokugcina ibhizinisi esiyimpumelelo
1. Inani: yini ozobe uyenzela iklayenti?
Isivumelwano sokugcina imali sihlukile kwezinye izinhlobo zezinkontileka ngokuthi esikhundleni sokukhokhela umsebenzi owenziwe, iklayenti likhokhela isithembiso somsebenzi okufanele senziwe. Ngakho-ke, kukufanele njenge-freelancer ukwenza iklayenti libone ukubaluleka kokusayina isivumelwano sokugcina nawe.
Yize kuzuzisa njengokuthola umsebenzi ngaphansi kwesitoreji, akulula ukukuthola. Imvamisa kuba nesithiyo sokuthi umsebenzi osebenza ngokuzimela abe manqikanqika ukuphakamisa umuntu ogcina imali kumthengi noma angakwazi ukuxhumana nokuthi kungani umuntu ogcina imali ebaluleke kwiklayenti. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi unqume ukuthi yiliphi inani ozohlinzeka iklayenti lakho lapho lisayina isivumelwano sokugcina nawe.
Ukuphendula umbuzo wenani, kufanele unqume izinsizakalo ozozinikeza iklayenti njalo.
2. Yenza umsebenzi: qonda iklayenti lakho.
Ngaphandle kwalokhu kuba umkhuba omuhle webhizinisi, kubuye kube nenhlonipho, futhi kuhamba ibanga elide ekunqumeni ukuthi ungakanani umsebenzi ozowenza ngaphambi kokuthi wenze iklayenti lisayine nawe. Ngaphambi kokufaka isivumelwano sokugcina nekhasimende, chitha isikhathi ubacwaninga kanye nebhizinisi labo.
Qonda ukuthi ibhizinisi lisebenza kanjani futhi uthole izindawo lapho izinsizakalo zakho zingasiza ukuqhubekisela phambili izintshisekelo zebhizinisi labo. Lapho uya kwiklayenti futhi ukhombisa lelo zinga lolwazi mayelana nebhizinisi labo, kufaka phakathi nezindawo lapho izinsizakalo zakho zingabenza babe ngcono kakhulu, ufeze ngaphezu kwe-50% yomgomo.
3. Shutha isibhamu sakho: zimise kuklayenti
Lapho ucacisa ukuthi yiziphi izinsizakalo ofuna ukuzinikeza nokuthi iklayenti lizozuza kanjani, sekuyisikhathi sokuthengisa iklayenti kulowo ogcina imali. Ungakwenza lokhu ngezindlela ezimbili:
Ekuqaleni kobudlelwano bakho neklayenti, lapho uhlongoza ukwenza umsebenzi othile wesivumelwano. Ungangena esivumelwaneni sokugcina lapho usuqedile ngempumelelo umsebenzi.
Ekupheleni komsebenzi wenkontileka, lapho kungahanjwa iklayenti. Ngalesi sikhathi, ngabe ngabe ube nokuqonda okungcono ngezidingo zebhizinisi leklayenti. Ngakho-ke ungaphakamisa ukuxhasa umsebenzi osanda kuwuqeda noma unikeze inani elingeziwe kwiklayenti.
4. Yenza isivumelwano: nquma isakhiwo ofuna ukusisebenzisa
Lokhu kubalulekile ngokombono wokulawulwa kwesikhathi. Kungasiza uma unquma ukuthi ufuna ukusebenza kanjani neklayenti. Ungakwenza lokhu nganoma iyiphi yalezi zindlela ezilandelayo:
Ungenza iklayenti likhokhe inani elithile lemali inyanga ngayinye ngenani lesikhathi okuvunyelwene ngaso. Qaphela ukuthi kufanele usho ukuthi kwenzekani uma, ngasizathu simbe, ungasisebenzisanga sonke isikhathi osinikiwe, noma usebenzise isikhathi esingaphezu kwalesi enyangeni enikeziwe.
Ungakhokhela iklayenti ngesethi enikeziwe yokuhanjiswa. Isivumelwano kufanele sisho ukuthi kwenzekani uma weqa inani lomsebenzi okuvunyelwene ngalo nokuthi kwenzekani uma kuvela isimo esiphuthumayo kuwe. Ngubani ophethe umsebenzi ezimweni ezinjalo?
Ungakhokha iklayenti ukuze likwazi ukufinyelela kuwe. Lokhu kungenzeka, noma kunjalo uma ungungoti ofunwayo emkhakheni wakho.
5. Chaza izinto ezilethwayo kanye nezinsuku eziwumnqamulajuqu zababekhona
Ngemuva kokuthatha isinqumo sokuthi isivumelwano sakho somgcini mali sizothatha siphi isakhiwo, kufanele unqume ububanzi bomsebenzi nokuthi iklayenti kufanele lilindele ukuthi umsebenzi uhanjiswe. Qiniseka ukuthi usho lokhu ngamagama acacile, njengoba kungacaci nje kukusethela amakhanda athile phansi komgwaqo.
Ngenkathi usho lokhu, futhi udinga ukunquma ukuthi kwenzekani uma iklayenti licela umsebenzi odlula umkhawulo womgcini. Chaza okuzokwenzeka ukuze iklayenti lazi ukuthi lilindeleni.
Isivumelwano sakho sokugcina imali kufanele futhi sifake nezinsuku zokugcina ezibekiwe. Thola ukuthi uzoletha kangaki kokukhishwa kwakho futhi uqinisekise ukuthi unamathela kumugqa wesikhathi.
Le yingxenye ebalulekile yesivumelwano sakho sokugcina imali. Kufanele unqume ukuthi ufuna ukukhokhelwa kanjani nokuthi uzokhokhwa kangaki. Nayi imibono embalwa okufanele uyicabangele:
Ukucela imali yesigaxa ngaphambi kwesikhathi somsebenzi
Ukukhokhelwa njalo ngenyanga - njengokuthenga
Uhlelo lokukhokha oluguquguqukayo olususelwa kunani lomsebenzi owulethayo ngenyanga
7. Ukuphatha isikhathi sakho
Amanye amaklayenti athatha isivumelwano sokugcina ukuthi asho ukuthi umhlinzeki wesevisi utholakala kubo ubusuku nemini. Uma iklayenti lakho libona isivumelwano sokugcina ngale ndlela, kufanele usisebenzise kabi umbono futhi usenze ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, ukungena kwakho esivumelwaneni sokugcina kungasho ukuphela kwempilo yakho njengoba wazi.
Ukugwema lesi sehlakalo esingemnandi, kufanele ubeke imali isikhathi sakho futhi uphathe umthwalo wakho ngokufanele. Khumbula ukuthi leli klayenti akulona kuphela onalo, futhi unesibopho kwamanye amaklayenti owasebenzelayo. Ngakho-ke, kufanele uhlele isikhathi sakho ukuze uqinisekise ukuthi uyakwazi ukusebenzela amanye amaklayenti futhi wenze umsebenzi omusha ngenkathi usahlangabezana nokulindelwe yikhasimende lakho kulondolozo.
8. Maka intuthuko yakho: thumela njalo imibiko
Ukubika ngomsebenzi owenzile, kanye nenqubekela phambili osuyenzile kuhamba ibanga elide ekuboniseni amaklayenti akho ukuthi isinqumo sawo sokukubeka kumgcini sizuzisa. Inikeza iklayenti ubufakazi bokuthi lithola inani ebelilikhokhele.
Okuqukethwe kombiko kuncike ohlotsheni lwezinsizakalo ozihlinzekela zona. Kodwa-ke, kufanele ibandakanye i-Key Performance Index (KPI) okwavunyelwana ngayo ngaphambilini. Lokhu kungaba izinkomba ezifana
Izinga lokuzibandakanya kwezokuxhumana nabantu
Inombolo yabafundi bokuthunyelwe kwebhulogi
Ukwanda okungenakulinganiswa kokuthengisa
Inani labalandeli bewebhusayithi
Ukwenza izinto zibe ngcono kakhulu, zama ukulinganisa umsebenzi wakho bese uqhathanisa izinga lokukhula njalo ngenyanga. Uma i-KPI yakho okuvunyelwene ngayo ibiyiqoqo lemigomo ebekiwe, bonisa ukuthi uthuthukile kangakanani ekufezeni izinhloso ezibekiwe.
9. Ukubuyekezwa okuvamile
Isivumelwano sakho sokugcina kufanele sifake ukubuyekezwa okuvamile neklayenti. Ungalungisa ukubuyekezwa minyaka yonke, ngonyaka, ngekota noma ngenyanga. Kufanele futhi ukwenze kucace kumakhasimende ukuthi uma ethola ukungenami nganoma iyiphi ingxenye yenkonzo oyinikezayo, kufanele bakuthinte ngokushesha.
Ukubuyekezwa akufanele kube okwenzelwe kuphela lapho kungathandeki, kepha kufanele kwenziwe kuwo wonke umsebenzi owunikezayo. Lokhu kungafaka izinto ezintsha emakethe ezizosiza iklayenti noma ukumisa ezinye izinqubo ezingasasebenzeli iklayenti - kungaba ngenxa yokukhula noma ukuguquka kwemakethe.
10. Ukuxazulula ingxabano
Ukuxazululwa kwengxabano kuyingxenye ebaluleke kakhulu yezivumelwano zokugcina imali futhi akufanele nanini kushaywe indiva noma ngabe buhle kangakanani ubudlelwano phakathi kwakho neklayenti. Kufanele ufake isigatshana ku- ukuthi bobabili amaqembu bazoyisingatha kanjani ingxabano evelayo. Kunezindlela ezine ezibalulekile ongasombulula ngazo ingxabano. Kunjalo:
Kangangokunokwenzeka, ufuna ukugwema ukumangalelwa. Ngakho-ke kufanele ufake umbandela ongakhetha enye indlela yokuxazulula izingxabano.
Thola Isivumelwano Sokulondoloza sokuqamba izinkontileka e-UAE
Ukukhetha ummeli kungenza noma kuphule iklayenti. Uma udinga usizo lwezomthetho, kubalulekile ukukhetha ummeli ozohlinzeka ngemisebenzi ngesikhathi esifanele, owaziyo umthetho, futhi akunikeze isiqiniseko sokuthi lelo cala lisezandleni ezinhle. Yize ulwazi lommeli neziqinisekiso kubalulekile, okubaluleke kakhulu uhlobo lwenkontileka ozongena nalo nalo mmeli.
Isivumelwano sokuphumelela sokwakhiwa sakhiwa izingxenye eziningi ezingadideka kakhulu ukuthi uzilandele. Abameli bethu ku Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ingakusiza ngezinto. Odinga ukukwenza ukuphendula imibuzo embalwa mayelana nokuncamelayo bese ushiyele konke okunye kithi. Finyelela kithi namuhla futhi uqale izinto.